Trangam-piainana mampalahelo :: Nitondra fangirifiriana mandra-maty ity tovovavy nofaohin’ny fiara • AoRaha
Namoizan’I Hariniaina Antsanirina Daniella ny ainy ny lozam-pifamoivoizana nihatra taminy tamin’ny alarobia 2 oktobra maraina teny andranomena, tamin’ny enina ora sy sasany teo ho eo. Tsy nanampo na inona na inona ity tovovavy vao roapolo taona monja raha niala tany an-tranony. Eny na mbola tao anatin’ilay fiara taksibe nandehanany aza dia tsy nihevitra ny hiharan-doza izy. Saingy tsy mampilaza tokoa ny loza ka tsy tsaroany akory izay tena zava-nisy fa teny an-dalana ho any amin’ny tobim-pahasalamana izy vao nahatsiaro tena. Notsaboina herinandro, nialana nenina, saingy tsy tana ny ainy.
Ankona tanteraka ny fianakaviana, indrindra ireo ray sy reny niteraka, tamin’ny zava-nanjo an’i Hariniaina Antsanirina Daniella, izay folaka an-dantony noho ny lozam-piarakodia nanjo azy tamin’ny alarobia 2 oktobra lasa teo teny Andranomena. Nialana nenina ihany izy teny amin’ny hopitaly saingy ny faritra tena saro-pady amin’ny vatany no naratra sy voadona nandritra iny loza iny, ka nahatonga azy tsy afaka mipetraka intsony mandra-pialany aina. «Mbola miankina tanteraka amin’ny mpitsabo ny fitsaboana ahy», hoy i Daniella, hoy izy nandritra ny resaka nifanaovana taminy, fony izy notsaboina teny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) teny Ampefiloha. Nanamafy ny fahadisoam-panantenany mikasika ny ho avin-janany kosa ny rainy teo am-pitantarana ny zava-misy. “Efa nanamafy ny dokotera fa tsy afaka hianatra intsony izy, hatramin’ny roa taona aloha, satria mafy loatra ny dona nihatra tamin’ny vatany. Nisy tapaka ny tongony roa, misy “plâtre” mihitsy aza ny ilany. Tsy izay anefa ny tena olana fa ny taola-maojany mihitsy no misy voadona hoy ireo mpitsabo ka mila fanarenana betsaka”, hoy Harizaka Noroniaina Hasina, rain’i Daniella, nandritra ny tafa nifanaovana taminy teo am-pitsaboana. “Maty ilay zanakay”, hoy kosa izy tamin-dranomaso nilaza ny vaovao ratsy tamin’ny talata 8 oktobra harivariva.
Tao anaty fangirifiriana
Tsy afaka nipetraka ity zazavavy ity tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza hatramin’ny ora farany nananana azy, tamin’ny talata 8 oktobra antoandro. Tamin’io fotoana io no nialany aina ka nodiany ho any amin’ny mandrakizay. Tao anatin’ny fangirifiriana tanteraka no nitsaboana azy teny amin’ny HJRA Ampefiloha, izay mbola nantenain’ ny fianakaviana ny hiara-belona aminy rehefa salama. Tsy izany anefa no nitranga fa nitarika azy ho any amin’ny fahafatesana izany dona nahazo azy izany. “Nanao krizy be izy nanomboka ny alatsinainy hariva. Mety tsy zakan’ny vatany intsony izany ka izao izy nandao anay izao”, hoy i Harizaka Noroniaina Hasina, rain’i Daniella.
Raha tsiahivina tokoa ny zava-niseho, dia teny an-dalana hamonjy fianarana asa izy izao sendra ny tampoka izao. Efa tsy nahatsiaro tena teo amin’ny folo minitra teo ho eo mihitsy aza izy raha ny filazany.
“Nidina tamin’ny taksibe nandehanako aho ka haka laharana 194 ho any Anosizato. Tsy tafidina tamin’ny tohatohatra kely fidirana anaty fiara akory aho no voalaza fa nisy fiara taksiborosy zotra nasionaly nandeha mafy ka nifaoka ahy avy hatrany. Tsy nahatsiaro tena aho nony avy eo fa efa teny an-dalana ho any amin’ny tobim-pahasalamana vao nahatadidy ny zava-niseho”, hoy ny fitantaran’
i Daniella mikasika an’ilay zava-niseho, fony fahavelony nanaraka fitsaboana teny amin’ny hopitaly. Na izany aza, nanamafy tamim-pahatsorana ity zazavavy ity fa anisan’ny mbola mahafaly azy ny fahavelomany satria voalazany fa maro ireo efa nihevitra azy ho efa nandao ny tany. Herinandro ihany anefa izany dia toa nofinofy ny niarahana taminy.
Tena mafy ho an’ny fianakavian’ i Daniella ny niatrehana an’iny loza izy. Tsy teto an-toerana, ohatra ny rainy nandritra ny fisian’ny loza, ka mafy ho azy ny nandre ny zava-nanjo an-janany. “Mampalahelo ny zava-misy satria menaky ny aina no voa. Izaho
rahateo tsy teto an-toerana fa tany Toamasina. Tsy nisy niditra tamin’ ny lohako ny asako tany an-toerana mandra-pahitako an’ilay zaza. Etsy andanin’izany, izahay sy ny fianakaviako mbola nifampita vaovao talohan’izany, tsy mbola nisy resaka na inona na inona”, hoy hatrany ny rainy.
Tsy ho an’ny rainy ihany anefa fa misy fiantraikany be dia be amin’ny renin’i Daniella iny lozam-pifamoivoizana iny. “Efa manana aretin’ny tosi-drà tsy milamina ny reniny. Vao mainka mampitombo ny aretina mahazo azy io fahavoazan-janany io. Lasa mila fitandremana kokoa noho ny teo aloha izy”, hoy ny rain’i Daniella.
Efa nanaovana fanadihadiana ilay mpamily nahavanon-doza nampitondra takaitra an’i Daniella izao. Raha ny fandaharam-potoana dia tokony niakatra Fampanoavana ny alatsinainy lasa teo ity raharaha ity. Manaitra ny tompon’andraikitra rehetra voakasik’ity lozam-pifamoivoizana ity ireo fianankaviana, indrindra ny trano fiantohana . Voalaza rahateo fa efa tonga namangy teny an-toerana ny tompon’ilay fiara. “Tena rava tanteraka ny nofinofin’ilay zaza, izay mbola teo am-panorenana ny ho aviny no sendra iny loza nampitondra takaitra azy mandra-pahafatiny iny”, hoy hatrany ny rain’i Daniella.
Tranga teny Ambohimangakely :: Tafaverina ilay zaza, herintaona sy tapany, nalaina an-keriny
Lozam-pifamoivoizana :: Tapa-tongotra sy naratra mafy ireto Karàna roa nandeha môtô